အရည်ယိုစီးမှု ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ဝေသူနှင့်စက်ရုံမှ အရည်ယိုစီးမှု အကြောင်းသင်သိရန်လိုအပ်သည်။
HUAI-AN HARDWARE CO., LTD. အတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း, ပို့ကုန်နှင့်စက်ရုံမှာဖြစ်ပါတယ် Taiwan of အရည်ယိုစီးမှု သောစျေးကွက်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောစျေးသည်များမှဖြစ်ပြီးရရှိလာသောကြသည်။ သူတို့ရဲ့ကြာကြာဝန်ဆောင်မှုဘဝနှင့်အရည်အသွေးသေချာစေရန်အမိန့်မှာကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာအရည်အသွေးစံနှုန်းများကိုတစ်ဦးလျှင်အဖြစ်ထိပ်ဆုံးတန်းကုန်ကြမ်းကို အသုံးပြု. ထိုထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အတိအကျနိုင်ငံတကာအရည်အသွေးအဆင့်တွေ့ဆုံနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခမ်းနားအဖွဲ့ကအစွမ်းကုန်ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုဖြင့်ရေးဆွဲကြပြီးနေရာအနှံတွင်သုံးစွဲဖို့ပြီးပြည့်စုံသောရှိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်လည်းသူတို့ရဲ့အလွန်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေး, prompt ကိုဝန်ဆောင်မှုနှင့်သင့်တော်သောစျေးနှုန်းကြောင့်လူသိများကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များပိုမိုမော်ဒယ်များကျေးဇူးပြုပြီးချင်တယ် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ယခု!
အကောင်းဆုံး အရည်ယိုစီးမှု ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် အရည်ယိုစီးမှု ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ အရည်ယိုစီးမှု ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan
DSC အားလုံးသံမဏိ float အမျိုးအစား TYPE အရည်ယိုစီးမှုမဟုတ်ဘူး.11LD ●ALL S.S.ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် CAP,ALL S.S.ပြည်တွင်း. ●MOP 28K. ●DSC FLOAT TYPE AIR TRAP သည် TANK အောက်မှပိုက်နှင့်ပိုက်လိုင်း၏နိမ့်ဆုံးမှ စ၍ CONDENSATE သို့မဟုတ်အရည်ကိုစွန့်ပစ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။. ●တစ်ချိန်က CONDENSATE AIR TRAP သို့ပြောင်းရွှေ့သည်,ထိုအခါဖိအားပေးလေကြောင်းစနစ်မှ CONDENSATE ကိုစွန့်ပစ်ရန်ထိုင်ခုံနှင့်အဆို့ရှင်ဖွင့်လှစ်.CONDENSATE စွန့်ပစ်ပြီးနောက်,ရေနှင့်ထိုင်ခုံအကြားရှိကျန်ရှိနေသေးသောရေတံဆိပ်ရှိပါတယ်,အဆို့ရှင်.လေမရှူရ. ●တံဆိပ်ခတ်ထားသောသံမဏိကိုယ်ထည်အားလုံးသည်ခွန်အားနှင့်မြင့်မားသောခံနိုင်ရည်ကိုအကျိုးရှိစေသည်. ●အချည်းနှီးသောယန္တရားသည်ကာလရှည်ဝန်ဆောင်မှုကိုပေးသည်. ●INTEGRAL STRAINER ဖြင့် ၀ င်ပါ။ အကောင်းဆုံးကာကွယ်မှုပေးသည်. ●အလေးချိန်ပေါ့. DSC အမျိုးအစားအမှတ်.11LD